ခရီးသွားခြင်းနှင့်သင်္ခါရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ခရီးသွားခြင်းနှင့်သင်္ခါရ	10
Posted by အတွေးလေး on Jan 22, 2016 in Poetry | 10 comments
တွေးချင်ရာတွေး ငေးချင်ရာ ငေး
သူတို့မှာ . . . .
အမုန်းတွေမရှိဘူး . .အငြိုးတေးလည်းမရှိ်
အတ္တကင်းတယ် . . .အပူပင်မဲ့တယ်
အပြုံး အငိုသူတို့မသိ . .နတ္ထိဆိုမှနတ္ထိရယ်ပါ။
ကြည့်ပါအုံး . . . .
သစ်တစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းဆိုသလိုပဲ . .
နားတဲ့အခါနား . . ပျံသွားတဲ့အခါပျံသွားလေရဲ့။
သစ်ပင်တွေဟာ . .သူတို့ရဲ့နားခိုရာလေးပါ။
သြော် . . .ဆောင်းတောင်ယွန်းပါပေါ့လား။်
မြူမှုံတွေသိုင်းရစ် . .တို့ချစ်တဲ့ပြည်အလှပါလား။
နွေဦးလေရူးတိုက်ချိန်ရောက်ရင် . . .
သြော် . . . . .် သင်္ခါရ ဆိုတဲ့အလှတရားပါတကား။
အောင် မိုးသူ says: ခရီးသွားခြင်း သင်္ခါရ
Tawwin Pan says: “နားကြည့်မိသလို” ဆိုလိုရင်းက နာကြည်းတာကိုပြောတာထင်ပါရဲ့
အတွေးလေး says: ဟုတ်ပါတယ် အမရေ Sorryပါဗျ ကားပေါ်မှာရေးရင်းကျန်သွားတယ်ထင်ရဲ့ ။ပြန်ပြင်လိုက်ပါ့မယ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျ
alinsett says: အတွေးလေး(ပြင်ဦးလွင်) ဆိုပဲ…
အတွေးလေး အနောက်မှာ… ပြင်ဦးလွင် ဆိုတာလေးတောင် ဖြည့်ထားပြီ… .ပြင်ဦးလွင်ကို … အခုထိ မရောက်ဖူးသေး…ရောက်ချင်နေတာ အပေါ်တစ်ပိုင်းတောင် သေတော့မယ်…
အတွေးလေး says: လာလည်နိုင်ပါတယ် ကိုအလင်းဆက်ရေ သွားချင်တဲ့နေရာကိုစံအောင်လိုက်ပို့ပါမယ်ဗျ
အတွေးလေး says: လာလည်နိုင်ပါတယ် ကိုအလင်းဆက်ရေ သွားချင်တဲ့နေရာကိုစုံအောင်လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်ဗျာ
လုံမလေးမွန်မွန် says: စာဖတ်ရင်း အလှတရားတွေ သင်္ခါရတွေ အကုန်လုံးကို မြင်ယောင်မိတယ် . . . ကိုယ်တိုင် ခရီးသွားနေရသလိုပဲ
အတွေးလေး says: ကျေးဇူးပါ အမ လုံမလေးမွန်မွန်ရေ လိုအပ်တာရှိရင်ဝေဖန်ပေးပါအုံးခင်ဗျ။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .သဘာဝကိုအတွေးပွါး
.အတွေးလေး…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 84
အတွေးလေး says: ကျေးဇူးကမ္ဘာပါဦ ကြီးမိုက်ရေ ကဗျာလေးကိုပိုကြိုက်သွားပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.